BonguZwane High School School Safety programme
Namannje basamangele abafundi bakamatikuletsheni besikole iBonguZwane High School School ngenselelo abayiphonselwe yilowo ongumsakazi osemnkantshubomvu emsakazweni uAlex Mthiyane womsakazo iGagasi 99.5. UMthiyane uthembise abafundi bebanga leshumi ukuthi uzokhokha R 2000 ngo distinction ngamunye kubafundi balesisikole.
Loku ukusho ngesikhathi uMasipala waseMzumbe ngokubambisana noMnyango wezokuphepha nokuxhumsanisa umphakathi unomkhankaso wokuhlumelelisa izimilo nokugqugquzela ezokuphwpha kulesikole. “Ngizonikeza R1000 kumfundi ngamunye ngo distinction ngamunye ozotholwa umfundi kulesikole. uR750 owakho wena njengomfundi bese uR250 uzotholwa umzali.” Zivele zakhexa imilomo izingane uma zizwa uMthiyane eziphonsela le nselelo.
UMnu N Hlongwa Mnyango wezokuphepha nokuxhumsanisa umphakathi uthe mining imibiko esifikile emnyangweni wabo mayelana nokuziphatha okungekuhle kwabafundi balesisikole. Ube esenxusa abafundi ukuthi baziphathe kahle bayeke ukuzimbandakanya ezidakamizweni ezibenza bagcine bengene ebugebengwini.
Lowo owayeyisiboshwa uqwashise ebafundi mayelana nobugebengu, “Ungafuni ukufunda ngokubona. Ngalahlekelwa okungingi. Ungafani nami esengikhuluma nginalezibazi kumina ngiphila impilo engingasophinde ngiyishintshe.” UNksz Mbali Msomi wakwa Liquor Authority uxayise abafundi ngokusebenzisa utshwala uma benenhloso yokuzijabulisa, “Loko kwenza kudaleke ukukhala okungunaphakade. Ungavumeli ukujabula kwamanje kube ukukhala okungasayophela.” Ube esetshela abafundi ngezinhlobonhlobo zezidakamizwa nokudayiswa kotshwala.
Umnyango wezeMpilo nawo weluleke ngezifo ezehlukene. UMphathi wabantu abasha kuMasipala wesifunda uGu uDudu Ngcobo uxwayise amantombazana ikakhulukazi ngokuziphatha kahle bangajahi ukwenza izinto zabantu abadala.
Esevala umcimbi uSekela Meya waseMzumbe uKhansela Nompilo Mweshe uthe yena esakhula umfundi wayeduma ngokuthi aphase kahle izifundo zakhe, agqoke kahle umfaniswano wakhe, acule kahle ekwayeni yesikole, abe umfundi ohloniphayo esikoleni. “Kodwa namhlanje abanfundi sebeduma ngokudakwa uma kade kuhanjiwe, ukugwaza, nokwenza zonke izinto ezingasile.” Uqhube wathi ucwaningo luveza ukuthi abantu abaningi abangene shi ebugebengwini abantu abasha, “Loko kusenze ukuthi singuMasipala waseMzumbe sifake isandla ukuthi silekelele ukuthi abantwana abenze kahle ku-matric sibanike umali yokubhalisa uma beyofunda ema University. Kumanje sesinikeze abafundi ababalelwa ku 150. Loko kudle uMasipala uR500 000. Sisazosikhuphula lesisibalo futhi. Siyaqhubeka futhi sithengela abantwana abawu 800 kusuleka ngo November kuze kube uJanuary. Sisazogqokisa 1 500 ngaphambi kokuba kuphele uMarch,” kuphetha uSekela Meya..